उपनिर्वाचन नतिजाः कसले कति स्थानमा जिते ? - Prarambha Khabar
उपनिर्वाचन नतिजाः कसले कति स्थानमा जिते ?
मंसिर १६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको ५२ पदका लागि शनिबार भएको उपनिर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
कसले कति स्थानमा जिते ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ३० स्थान
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले १३ स्थान
समाजवादी पार्टी नेपालले ४ स्थान
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले ३ स्थान
राष्ट्रिय जनमोर्चा १ स्थान
र स्वतन्त्र उम्मेदवार १ स्थान
तेक्वान्दोमा पार्वती गुरुङले जितिन् स्वर्ण
महानगरभरि हरियाली पार्क बनाउने मेयर शाक्यको घोषणा
सूचना आयोगमा गरिएका सिफारिस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिनको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइँदै
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिनको प्रतिवेदन अर्थ…
महानगरले माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म साइकल लेन व्यवस्थापन गर्ने
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्ट्रोम फाउन्डेसनको सहयोग